भगवानबाट तत्काल मद्दतको लागि प्रार्थना | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना परमेश्वरबाट तत्काल सहायताको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
परमेश्वरबाट तत्काल सहायताको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
आज हामी भगवानबाट तुरून्त सहायताको लागि प्रार्थनामा संलग्न हुनेछौं। यदि तपाईं हाम्रा प्रकाशनहरूसँग अनुरूप हुनुहुन्छ भने, तपाईंले हाम्रो लेख पढ्नुभयो होला मद्दतको लागि छोटो प्रार्थना। यदि तपाईंले त्यो पढ्नु भएको छ भने, तपाईंले सोचिरहनु भएको छ कि भगवानबाट तत्काल मद्दतको लागि प्रार्थनाको सार अहिले के हो जब हामीसँग पहिले नै मदतका लागि छोटो प्रार्थना हुन्छ। तपाईंले थाहा पाउनु नैपर्दछ कि मद्दतले आफैमा लामो प्रक्रिया लिन्छ जब ईश्वरयलका सन्तानहरूलाई परमेश्वरले फिरऊनको बन्धनबाट छुटाउनुहुन्छ, उनीहरूको छुटकारा रातोरात आएको थिएन, यसले क्रमिक प्रक्रियाहरू लिए। परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो कि इस्रियलका सन्तानहरूले केही प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्‍यो; त्यसकारण उहाँले उनीहरूको छुटकारा बिस्तारै आउन दिनुभयो।
अर्कोमा, जब प्राप्त भयो रातो समुन्द्र तर त्यहाँ कुनै बाटो थिएन, यद्यपि फिरऊन र उसको रथहरूले तिनीहरू समातेर मिश्रको दासत्वमा इसरेलका सन्तानहरूलाई फर्काउन तिनीहरूको पछाडि दौडिरहेका थिए। त्यस समयमा बच्चाहरूलाई ईसरलको सहयोग चाहिने बिस्तारै आउँदैन। तिनीहरूलाई तत्काल मद्दत चाहिन्छ, एक तत्काल, एक जुन झट्टै हुनेछ। साथै, हाम्रो जीवनमा, केहि बिस्तारै बिस्तारै आउँदछ, र केहि त्यस्तो हुन सक्छ कि धेरै मिनेट, वा अन्यथा, एक अप्रिय घटना हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, कसैले शल्यक्रियाका लागि थिएटरमा जान्छ र बाँच्नको सम्भावना /०/50० छ। यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल मद्दत चाहिन्छ।
तत्काल सहयोगको अर्को उत्कृष्ट उदाहरण यहोशूको पुस्तकमा पाउन सकिन्छ जब यहोशूले एमोरीहरूसँग लडिरहेको थियो, यहोशूलाई रात थाहा छ भनेर थाहा थियो र पृथ्वी अन्धकारले ढाकिए पछि शत्रुहरू भाग्नेछन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई सहयोग चाहिएको थियो, यहोशूले गिदोनमाथि सूर्य अस्ताउन लगाए र अजेलोनमा चन्द्रमा स्थिर रहनु पर्छ। धर्मशास्त्रले यो रेकर्ड गरेको छ कि यहोशूलाई गरे जस्तै कुनै व्यक्तिको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभएन। हामीलाई हाम्रो जीवन, हाम्रो व्यवसाय, हाम्रो शिक्षाविद्, क्यारियर, र हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित सबै थोकमा तुरून्त मद्दत चाहिन्छ।
प्रभु परमेश्वर, म तपाईको सहयोगका लागि प्रार्थना गर्दछु किनकि म भोली रंगमञ्चमा जान्छु, तपाईका हातहरू मसँग येशूको नाममा जानुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धर्मशास्त्रले भन्छ, प्रभुको नजर सधैं धर्मीहरूमाथि हुन्छ, र उहाँका कानहरू तिनीहरूका प्रार्थनाहरूमा सदैव ध्यान दिन्छन्। हे प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईका हातहरू मेरो जीवनमा रहोस्, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईको सुरक्षा ममाथि रहोस्। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईको कृपामा तपाई डाक्टर र नर्सहरूसँग मिलेर काम गर्नुहोस्, र तपाईंले तिनीहरूलाई येशूको नाममा विजय दिनुहुनेछ।
प्रभु येशू, म भोलिको निर्णय मा तपाईंको मद्दतको लागि प्रार्थना गर्दछु। यदि त्यसो भएमा, मानिसहरूले ममार्फत तपाईंको पवित्र नामको उपहास गर्नेछन्। तिनीहरूले जान्दछन् कि यो तपाईं मात्र हुनुहुन्छ जुन म सेवा गर्दछु, र म तपाईंको सेवामा समर्पित छु। हे प्रभु, यस नोटमा, म मद्दत चाहन्छु। धर्मशास्त्रले मलाई भन्यो कि तपाईं मानिस र राजाहरूको हृदय हुनुहुन्छ, र तपाईंले तिनीहरूलाई पानीको बहा जस्तो अगुवाई गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई न्यायाधीशको हृदय छुने छु भनेर प्रार्थना गर्दछु, र उसले मेरो पक्षमा फैसला सुनाउँछ। यस्तो लेखिएको छ कि यदि कुनै व्यक्तिको बाटोले परमेश्वरलाई खुशी तुल्याउँछ भने, उसले उसलाई अन्य मानिसहरूमा अनुग्रह देखाउनेछ। हे प्रभु येशू, मलाई भोलि तपाईंको बहुमूल्य नामको आधारमा न्यायाधीशको सामु ग्रहण गर्नुहोस्।
मेरा परमेश्वर, मेरा शत्रुहरू अति नै महान् छन्, र तिनीहरूले मलाई नछोडेसम्म आराम गर्ने कसम खाएनन्। यद्यपि, मैले तपाईंको वचनमा यस प्रकारले सान्त्वना लिएँ कि प्रभुको नाम एक बलियो धरहरा हो, धर्मीहरू भित्र पस्छन् र तिनीहरू मुक्ति पाउँछन्। हे प्रभु, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि उठ्नुहोस् र मलाई येशूको नाममा उनीहरूमाथि विजयी गराउनुहोस्। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस् र तपाईंका शत्रुहरूलाई तितरबितर पारिदिनुहोस्, ती दुष्ट मानिसहरूले मलाई लज्जित पार्छन्।
प्रभु येशू, तपाईं चाहिएको समयमा मेरो वास्तविक सहयोगी हुनुहुन्छ। मलाई गलत आरोप लगाइएको छ; बाँकी संसारले अब मलाई अपराधीको रूपमा देख्यो किनभने उनीहरूले मेरो बारेमा सुनेका छन्। केवल तपाईंलाई थाहा छ कि म निर्दोष छु, र मलाई अपराधिक बारेमा केही थाहा छैन। हे प्रभु येशू, म बिन्ती गर्दछु कि तपाईंले मलाई न्याय गर्नुहुनेछ। मेरो प्रार्थना छ कि तपाईंले मेरो शत्रुहरूको छाउनीमा लडाई लड्नु हुनेछ र उनीहरूमा असमानता पैदा गर्नुहोस्। तिनीहरू जसले मलाई नराम्रो कुरा गर्छन् तिनीहरूलाई कहिल्यै शान्ति नदेऊन्, तिनीहरूले जतिसुकै मेहनत गरे पनि तिनीहरूलाई निरन्तर सर्ममा परून्। आज राती तिनीहरू निद्रामा यहूदाका गोत्रमा सिंहको रूपमा तिनीहरूको सामने आउँदछन्, उनीहरूले उनीहरूको सपनामा देख्न सकून् कि तिनीहरूले सत्य कुरा नगरेसम्म तिनीहरूलाई कहिल्यै शान्ति नबनाऊन्।
हे प्रभु प्रभु, लामो पर्खाइले सधैं मानिसको आशा र विश्वास डगमगाउँदछ। हे प्रभु, लामो समयदेखि मैले तपाईलाई आशिष् दिन म पर्खिरहेछु, तर अब, यो धैर्यताबाट फुत्किएको जस्तो देखिन्छ, दुष्टका वचनहरू ममाथि हरेक दिन क्रोधित हुन्छन्। मेरो स्वभावको कारणले गर्दा म गिल्लाको पात्र बनेको छु। तर म जान्दछु कि तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। धर्मशास्त्रले भन्यो कि मेरा परमेश्वर ख्रीष्ट येशू मार्फत महिमाका सबै सम्पत्तिहरू अनुसार मेरो सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुनेछ। म परमेश्वरको यो वचनको साँचो हुँ, र म येशूको नाममा मेरो सबै आवश्यकताहरूको प्रबन्धको लागि प्रार्थना गर्दछु। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंको कृपाको कारणले गर्दा, तपाईंले मेरा सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहोस्, तपाईंले मलाई प्रशस्त आशिष्‌ दिनुहुनेछ, ती आशिष्‌हरू जसले मुख खोलेर अजर खोल्न सक्छन्, अरू मानिसहरूलाई प्रेरित गर्ने आशीर्वाद, म तपाईं येशूको नाममा मलाई मदत गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। ।
बुबा प्रभु, म बाहिरका सबै पुरुष र महिलाको लागि प्रार्थना गर्छु जुन असहाय बनेको छ। तपाईं असहाय, टुहुराका बुबाका सहयोगी हुनुहुन्छ, र म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंले येशूका नाममा तिनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। सबैलाई उनीहरूको आवश्यक्ताको बिन्दुमा भेट्नुहोस् र उनीहरूलाई तपाईंको पवित्र नाममा हल्लेलूह गाउनुहोस्। आमेन।
अघिल्लो लेखमाबाइबल पदहरू मद्दतको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्
अर्को लेखमामद्दत र निर्देशनको लागि प्रार्थना
जैकलिन जोन्स अगस्त,, २०१ At बिहान :23::2020 बिहान
तपाईंको प्रार्थना पढ्नुहोस् र उनीहरूबाट धेरै शान्ति पाए। कृपया यस्तै समयमा आत्मा खोजी प्रार्थनाहरू प्रिन्ट गर्न जारी राख्नुहोस्। भगवान आशीर्वाद!
Oluwaseun फिलिप सेप्टेम्बर १, २०२० बिहान :30::2020 बिहान
केनेथ ग्रे जून २,, २०१ 18 साँझ :2021: १। बजे
बस प्रार्थना गरिरहनु? यदि भगवान मौन बस्दै हुनुहुन्छ, र केहि जवाफ दिनुहुन्न भने, किन प्रार्थना गर्नुहुन्छ? उसले जवाफ दिदैन। उहाँ हाम्रोलागि यहाँ हुने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। तब ऊ (भगवान) कहिल्यै देखाउँदैन। परमेश्वरको चुपचाप कुनै पनि कुरा भन्दा खराब छ। मौन यहाँ हाम्रो लागि छैन। हाम्रो लागि यहाँ हुनु भनेको हाम्रो जीवनमा अन्तर्क्रियात्मक हुनु हो। मौन र अनुपस्थिति अन्तर्क्रियात्मक हुँदैन।
धन्यबाद, र भगवान धन्यबाद दिनुहोस्, येशू पवित्र नाममा, आमेन।
प्रार्थनाले हतियारको रूपमा येशूको रगत प्रयोग गर्ने कुरामा औंल्याउँछ